नयाँ दैनिक | ओले गनरबाट म्यानचेस्टर युनाइटेडको कथा फेरिएला त ? ओले गनरबाट म्यानचेस्टर युनाइटेडको कथा फेरिएला त ? – नयाँ दैनिक
चैत १५, काठमाडौँ । प्रिमियर लिगमा केहि समय एकछत्र राज गरेको फुटबल क्लब हो म्यानचेस्टर युनाइटेड ।रेड डेभिल नामले परिचित यो क्लब केहि समयदेखि आफ्नो लयमा थिएन ।
सर फर्गुसनको त्यो कहानीः
मुलतः सर एलेक्स फर्गुसनले क्लबको व्यवस्थापकबाट रिटायर्ड लिएपछि म्यानचेस्टर युनाइटेड के होला भन्ने सबैको चिन्ता थियो । यहि चिन्ताको समाधान गर्ने हेतुले म्यायुले डेभिड मोयजलाइ प्रशीक्षकको जिम्मेवारी दियो, जुन सर एलेक्स फर्गुसनकै आग्रहमा भएको थियो ।
एभर्टनालाई सामान्य खर्चमा प्रिमियर लिगमा स्थान बनाइराख्न मोयजको भूमिकाले उनलाइ म्यानचेस्टर युनाइटेडसम्म ल्याउन सहयोग गरे तापनि उनी क्लबको बिरासत धान्न सक्षम् हुन सकेनन् ।संसारभर रहेका फ्यानले सर एलेक्स फर्गुसनको रेड डेभिलबाट धेरै अपेक्षा गरिरहे तर पनि प्रिमियर लिग जिताउन सक्ने व्यवस्थापक पाउन सकेनन् ।
यो विचमा म्यानचेस्टरमा धेरै परिवर्तनहरु आइसक्यो । सर फर्गुसनले छोडेपछि एउटा पनि प्रिमियर लिग जित्न नसक्नुमा दोषी व्यवस्थापक नै भएको आरोप फ्यानहरुले लगाइरहे । मोयजको बहिर्गमनसँगै लुइस भान गाल क्लबको व्यवस्थापक नियुक्त भए । डच क्लबमा रहँदा आयाक्सलाइ च्याम्पियन्स लिग जिताएका कारण उनीमाथि धेरैको भरोसा थीयो । तर भान गाल पनि एफए कप बाहेक प्रिमियर लिग र च्याम्पियन्स लिगमा रित्तो हात फर्कनु पर्यो । म्यानचेस्टर युनाइटेडले प्रिमियर लिग र च्याम्पियन्स लिग जित्नु त टाढाको कुरा शीर्ष चारमा स्थान बनाउन समेत हम्मे पर्न थालिसकेको थियो ।
यसैबिचमा स्पेसल वान नामले परिचित जोजे माउरिन्हो म्यानयु आइपुगे । पोर्टो तथा इन्टरमिलानलाई च्याम्पियन्स लिग जिताएर युरोपमा चर्चित बनेका माउरिन्हो स्पेनको रियल म्याड्रिड तथा लंडनमा चेल्सिलाई लिग जिताउने प्रशिक्षक थिए । अब सबैले एक पटक त प्रिमियर लिग वा च्याम्पियन्स लिग जिताउन सक्छन भन्ने सबैको आश थियो । माउरिन्होबाट युरोपा लिग र एफ ए कप बाहेक अरु ट्रफी म्यानचेस्टरमा भित्रिएन ।
सर फर्गुसन पछिका सबै व्यवस्थापक म्यानचेस्टर युनाइटेडमा प्रवेश भएपनि कुनै खास प्रगति देख्न नपाएको गुनासो फ्यानहरुको रह्यो । २० पटक प्रिमियर लिग जितेको म्यानचेस्टर १६ पटक उपबिजेता बनेको छ । एकताका ‘सर ऐलेक्स फर्गुसन छन् र त म्यानचेस्टर युनाइटेड छ’ भन्ने स्लोगान स्ट्यामफोर्ड ब्रिज रंगसालामा पटक- पटक घन्किथ्यो । फर्गुसनकै अन्तिम व्यव्सथापकीय भूमिकामा म्यानयुले सन् २०१२\_१३को प्रमियर लिग जिते पछि यो परिदृश्य दोहोरिएको छैन् ।
फर्गुसन पछिको कालमा म्यानचेस्टरमा धेरै घाम-पानी फेरिईसकेको छ । तर पनि उनीहरुका प्रशंसकमा जितको भोक र आशा जिवीत नै छ कि, म्यानचेस्टर भनेको ‘रेड डेभिल’ हो । यो टोली हार मान्ने टोली होइन ।
जोजे माउरिन्होलाई बर्खास्ती गरेपछि अन्तरिम प्रशीक्षकको भूमिकामा आफुले खेलाडी जीवन बिताएको क्लबमा आएका थिए नर्वेजीयन ओले गनर सोल्स्क्जर । उनी आएसंगै म्यानचेस्टरमा त्राण भरिएको छ । टिममा मात्र हैन संसारभरका क्लबका समर्थकमा पनि आशा भरिएको छ ।
जोजे माउरिन्हो र खेलाडिका विचमा टक्कर परेका समाचारहरु बाहिरिएर छताछुल्ल भएको तथा क्लबलाई संकट परेका बेलामा आईपुगेका उनीमाथी दर्शक तथा फ्यानहरुको धेरै अपेक्षा भने थिएन । र पनि उनी टोलीलाई जित दिलाइ रहन सफल भए ।
म्यानयुको अन्तरिम प्रशीक्षकः
ओले गनरको आगमनसंगै म्यानचेस्टर युनाइटेडले लय समातेको छ । खेलाडीहरुमा सद्भाव कायम भएको छ भने टिम मजवुद् देखिएको छ । जुन कुराको पुष्टी च्याम्पियन्स लिगको दोस्रो खेलबाट ओले गोनरले सबैलाई चुपचाप बताईदिए । लगभग च्याम्पियन्स लिगको नकआउट चरणबाट बाहिरियो भनेर भविष्यवाणी गर्नेहरुले आफ्नो भनाइ फिर्ता लिन वाध्य हुन पर्यो ।
म्यानयुको पूर्णकालीन प्रशीक्षकमा नियुक्तीः
म्यानचेस्टर युनाइटेडले उनै ओले गनर सोल्स्क्जरलाई अन्तरिम प्रशीक्षकबाट अन्तरिम हटाएर ३ वर्षको लागि स्थाइ रुपमा प्रशीक्षकको भूमिका प्रदान गरेको छन् । अन्तरिमकालमा गरेको मेहनतले उनलाई क्लबले विस्वास सहित मुख्य प्रशीक्षकमा नियुक्ति दिएको छ ।
फुटबलमा सबैचिज सोचेको जस्तो हुदैन ।ठुलो संख्यामा समर्थक रहेको क्लबको व्यवस्थापक हुनु अवसर मात्र नभएर चुनौति पनि हो । क्लब व्यवस्थापन तथा फ्यानहरुको प्रेसर थेग्न मुस्किल हुने हुँदा आफ्नो पद जोगाइ राख्न गेम पनि जिताउन पर्छ । गेम मात्र होइन, ट्रफि जिताइ रहन पर्छ ।फ्यान र व्यवस्थापनको आकांक्षा पुरा नहुने बित्तिकै व्यवस्थापक स्याक्ड हुन परेका उदाहरण सबैले भोगेको छन् भन्ने ओले गनरलाइ राम्ररी थाहा छ ।अब यि मुख्य प्रशीक्षकमाथी म्यानचेस्टर युनाइटेडका संसार भरि रहेका प्रशंसकहरुले नजर लगाउने छन् ।